महरा सरको पुनरागमन « Anumodan National Daily
By : - धर्मेन्द्र झा
प्रकाशित मिति : १२ फाल्गुन २०७६, सोमबार १०:३३
राजनीति र समाजमा समानरुपले स्थापित नाम हो एम सर । एम सर, विगतको माओवादी राजनीतिको वैचारिक पक्षलाई स्वीकार गर्नेहरूले आदरका साथ सम्मान व्यक्त गर्ने नाम । यस्तै राजनीतिबाट टाढा टाढासम्म कुनै साइनो नहुने राप्तीको समाजको कुनै पनि व्यक्तिले श्रद्धा व्यक्त गर्ने नाम हो एम सर । नेपाली राजनीति र समाजबाट हठात बहिगर्मनको शिकार हुन पुगेका यिनै एम सर अर्थात् महरा सर अर्थात् कृष्णबहादुर महराको एकपटक पुनः पुनरागमन भएको छ । विगतको नेकपा (माओवादी) को एक शीर्षस्थ नेता हुन् महरा सर, जो नेकपा (एमाले) संग उनको पार्टी एकीकृत भएपछि विगतकै जस्तो सम्मानित र आदरणीय अवस्थामा कायम रहन सकेनन् या कायम रहन दिइएन । यो अवस्था स्वाभाविक हो कि अस्वाभाविक ? यसको निक्र्योल गर्न अनेकौं पाटो उधिन्नु पर्ने बाध्यताको सिर्जना हुनसक्छ । विश्लेषकहरू इमानदारीपूर्वक यसका लागि तयार रहनु आवश्यक छ ।
विगतमा तत्कालीन नेकपा (माओवादी) को महासचिव हुदै देशको उपप्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सफलतापूर्वक निर्वाह गरेका महरा सरले पछिल्लोपटक प्रतिनिधिसभाको सभामुखको जिम्मेवारी पाएका थिए, तर उनले सभामुखको निर्धारित पदावधि पूरा गर्न सकेनन् । एक किसिमले भन्ने हो भने सभामुखको पदावधि पूरा गर्न नसक्नु उनको असफलता थियो र देश तथा आम नेपाली जनताले थाहा पाउने गरी उनको यो पहिलो असफलता थियो । यसअघि उनी कुनै पनि मोर्चामा असफल भएको प्रमाण पाइदैन । विगतमा माओवादीको खुला मोर्चा (संयुक्त जनमोर्चा) का माध्यमले खुला राजनीतिमा पदार्पण गर्ने महरा सर त्यसभन्दा अघि शिक्षण पेशामा संलग्न थिए र यसै रुपमा समाजमा प्रतिष्ठित र स्थापित थिए । खुला राजनीतिमा पदार्पण गर्ने तत्कालीन माओवादीका पहिलो पुस्ताका नेताका रुपमा स्थापित महरा सरले त्यसपछि राजनीतिक रुपले कहिल्यै असफल हुनु परेन, तर अहिले आएर राजनीतिक र सामाजिक जीवनको उत्तराद्र्धमा महरा सर एक किसिमले असफल देखिएका छन् । किन ? यसका अनेक कारण हुन सक्छन् । मुख्य कारण त उनी स्वयं पनि हसन्, जसले शायद समयको “चाल” बुझ्न सकेनन् ।
संसद सचिवालयकी एक महिला कर्मचारीमाथि बलात्कारको प्रयासको आरोप उनले खेप्नु प¥यो र यसै अभियोगमा पुर्पक्षका नाममा उनले प्रहरी हिरासत र डिल्लीबजार कारागारमा एक सय २० दिन गुजार्न बाध्य हुनुप¥यो । यसै साता काठमाडौ जिल्ला अदालतले उनलाई आरोपबाट सफाई दिएको छ । अदालतका अनुसार उनीमाथि लगाइएको अभियोग प्रमाणित हुन सकेन । यो सन्दर्भले नेपाली समाज र राजनीतिमा एकैपटक अनेकौ प्रश्नको उठान गरेको छ । एकैपटक जनमानसमा उनको पार्टी, सरकार, प्रहरी प्रशासन र अदालती प्रक्रियाबारे अनेकौं शंका उपशंकाको प्रसार भएको छ । महरा वैचारिक रुपमा जति दृढ मानिन्छन्, व्यवहारिक रुपमा त्यति नै लचिलो र नरम मानिन्छन् । मान्नेहरू यही लचकतालाई उनको राजनीतिक कुटिलताका रुपमा स्वीकार्दछन् । जानकारहरूका अनुसार नेपाली सन्दर्भमा भूराजनीतिक अवस्थाको विश्लेषण गरिएका खण्डमा उनलाई एक खास पक्षमा रुझान राख्ने नेताका रुपमा हेर्ने गरिएको कुरामा विमति हुन सक्दैन । यी सबै कुराका आधारमा उनी पछिल्लो पटक एकीकृत भई बनेको नेकपा भित्रका धेरै नया–पुराना नेताका लागि चुनौती बनिरहेको स्पष्ट छ ।
राजनीतिमा एउटा कुरा बडो विचित्रको हुदो रहेछ । आन्तरिक रुपमा कुनै पनि नेता जतिसुकै भ्रष्ट र दागदार चरित्रको भए पनि त्यो कुरा जबसम्म बाहिरी समाजका लागि चर्चाको विषय बन्दैन सम्बन्धित नेतालाई खासै असर पर्दैन, तर जब यही कुरा बाह्य चासोको रुपमा प्रकट हुन्छ, सम्बन्धित नेताको छवि धुमलिन पुग्छ र यसको प्रभाव उसको राजनीतिक र सामाजिक जीवनमा पर्दछ । यसलाई यसरी पनि बुभ्न सकिन्छ– कस्तै भ्रष्ट र चरित्रहीन व्यक्तिले पनि आफनो नेता सदाचारयुक्त र नैतिक रुपमा सबल होस भन्ने चाहन्छ । आमजनताको यही कसीमा कुनै नेता खरो उत्रन सकेन भने उसको राजनीतिक जीवनमा त्यसले नकारात्मक प्रभाव पार्ने निश्चित छ । अमेरिकाका पूर्व राष्ट्रपति विल क्लिन्टन र मोनिका लेवेन्स्कीको सम्बन्ध र त्यसले उत्पन्न गरेको सामाजिक प्रभावलाई यसै सन्दर्भमा मूल्यांकन गर्न सकिन्छ । महरा सर र संसदकी ती महिला कर्मचारी रोशनीबीचको सम्बन्धको सत्यता र यथार्थ के हो ? त्यसबारे यसै भन्न सकिदैन । तर सत्य के हो भने नेपाली समाजका लागि एकपटक यो सन्दर्भ चासोको विषय बन्यो ।
महरा सरको पक्षबाट हेर्ने हो भने यस्तो सन्दर्भलाई चासोको विषय बनाइयो जसमा कुनै सत्यता छैन । प्रश्न उठ्छ, यसमा कुनै सत्यता नै थिएन भने घटनाका समयमा सार्वजनिक रुपमा छताछुल्ल हुन पुगेका कुराहरू के हुन् ? रोशनी त्यसबेला अचानक मिडियाका सामु किन देखा परिन् र उनले प्रहरीमा उजुरी किन गरिन् ? पछि तिनै उजुरीकर्ताले आफ्नो बयान किन बदलिन् ? यी यस्ता प्रश्नहरू हुन् जसका दुईवटा सम्भावित उत्तर हुन सक्छन् । पहिलो, सबै सत्य हो र दोस्रो, सुनियोजित रुपमा कहिकतैबाट षडयन्त्र गरियो । अहिले काठमाडौ जिल्ला अदालतको आदेशलाई आधार मान्ने हो भने दोस्रो उत्तरका पक्षमा जनमत निर्माण हुने अवस्थाको सिर्जना भएको छ । यसको उदाहरणका रुपमा महराको निर्वाचन क्षेत्र दाङलाई हेर्न सकिन्छ । यहाका अधिकांश जनता महरा सरलाई “जानाजान” फसाइयो भन्ने पक्षमा छन् । सत्य जेसुकै होस, भविष्यले उदुघाटित गर्ने नै छ, तर अहिलेलाई सत्य के हो भने स्थानीय समाजमा घाइते बन्न पुगेको महरा सरको चरित्रको त धेरै हदसम्म उपचार सम्भव छ तर अन्तर्राष्ट्रिय समाज तथा राजनीतिक परिदृश्यमा भएको क्षतिको न्यूनीकरणका लागि लामो समय लाग्नसक्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिदैन ।
एकछिनलाई मानौं, रोशनी प्रकरण प्रायोजित नै थियो । यसो हो भने यसको प्रायोजन कसले र कहाबाट ग¥यो ? महरा सरको चरित्रमाथि कालो दाग पोत्दा कसलाई फाइदा भयो ? यसबारे पनि यकिनका साथ केही भन्न सकिन्न, तर लख काट्न सकिने अवस्था अनेक छन् । पार्टीका अन्य नेताका लागि चुनौती र भूराजनीतिका बारेमा केही कुरा त माथि पनि चर्चा गरियो । यस सन्दर्भमा उनैको विगतको पार्टीको उनका प्रतिस्पर्धी नेताको नाम पनि अहिले आम चर्चाको विषय बनेको सत्यलाई अस्वीकार गर्न सकिदैन । राजनीतिको जोडघटाउ गर्दै जादा महरा प्रकरण सभामुखको पद र अमेरिकी अनुदानमा आधारित कार्यक्रम मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसिसि) संग जोडिन पुग्छ । केही राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार महरा एमसिसिप्रति खासै उदार थिएनन् र यसै कारणले पनि उनको पद धरापमा परेको हो । महरालाई बलात्कारको आरोप लागेदेखि लगातार रिक्त रहदै आएको सभामुख पदको पूर्ति लगत्तै अदालतको फैसला आउनु संयोग मात्र हो कि अर्थोक हो ? प्रश्न सोध्नेको मुखलाई थुन्न सकिदैन । अदालतले सफाई दिइसकेपछि उनको सभामुख पद फिर्ता हुन सम्भव छ त ? स्वयं महरा सरले अहिलेसम्म मुख नखोलेको पृष्ठभूमिमा अरुले गर्ने कुनै पनि कुरा अनुमान मात्र हुने निश्चित छ । आशा गरौं, स्थानीय समाजमा सामाजिक रुपले तंग्रिइसकेका महरा सरले आफू राजनीतिक रुपमा पुनरागमन गर्न सही समयमा निश्चय पनि मुख खोल्नेछन् ।